Voaroaka any Afghanistan i Afghanistan: Nahoana no faly ireo hotely?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Voaroaka any Afghanistan i Afghanistan: Nahoana no faly ireo hotely?
Vaovao Mafana Afghanistan • Airport • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda • Vaovao isan-karazany
Voaroaka any Afghanistan ny evacuees Afghanistan
Ny Governemanta Oganda androany maraina, 25 aogositra 2021, dia nahazo mpitsoa-ponenana miisa 51 amin'ny mpitsoa-ponenana 2,000 andrasana avy any Afghanistan izay tonga tamin'ny sidina manokana natao tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Entebbe.
Ny trano fandraisam-bahiny any Entebbe dia manantena mialoha ny filatsaky ny onjam-peo avy amin'ny famandrihana satria nilentika ny haavon'ny trano fonenan'ny COVID-19 tamin'ny 2020.
Ireo mpitsoa-ponenana dia nandalo ny fizahana fiarovana ilaina ary koa ny fanandramana COVID-19 tsy maintsy atao ary ny fomba fanao quarantine ilaina.
Ireo mpitsoa-ponenana Ogandey kasaina handeha hivezivezena amin'ny sidina dia tsy nahavita azy noho ny olana nahazo ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina ao Kabul.
Izany dia taorian'ny fangatahana nataon'ny governemanta amerikana sy ny faneken'ny Governemanta Oganda hampiantrano vonjimaika ireo teratany Afghan izay mandalo any Etazonia sy toeran-kafa manerantany manaraka ny noraisin'ny Taliban ny governemanta Afghan.
Fanambarana iray avy amin'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny any Kampala no mivaky toy izao:
“Uganda sy Etazonia dia mankafy fifandraisana maharitra sy roa tonta izay manan-tantara manan-tantara ary manohy mikatsaka tombontsoa iraisana ho tombontsoan'ny firenena roa tonta. Ny fanapahan-kevitra hampiantrano ireo sahirana dia ampahalain'ny Governemanta ao Oganda amin'ny resaka raharaham-pirenena. ”
Mameno ny fihetsiky ny Governemanta Oganda, ny masoivohon'i Etazonia ao Oganda nisioka hoe: “Manana fomba amam-panao ela ny vahoaka Ogandey amin'ny fandraisana ireo mpitsoa-ponenana sy ireo vondrom-piarahamonina sahirana hafa. Amin'ny maha mpanohana roa lehibe indrindra ireo mpitsoa-ponenana ao Oganda sy ireo vondrom-piarahamonin'izy ireo mampiantrano Ogandey, Etazonia dia maneho ny fankasitrahany ny vahoaka Ogandey. Ny Governemanta Oganda indray dia naneho ny fahavononany handray anjara amin'ny resaka raharaham-pirenena. Derainay ny ezaka nataony sy ireo an'ny fikambanana eo an-toerana sy iraisam-pirenena any Oganda… ”
Ireo evacuees, izay misy lehilahy, vehivavy ary ankizy, dia nandalo ny fandriam-pahalemana ilaina ary koa ny fanandramana COVID-19 tsy maintsy atao ary ny fomba fitakiana quarantine ilaina.
Ireo mpitsoa-ponenana Ogandey izay kasaina handeha hivezivezena amin'ny sidina dia tsy afaka nanao izany noho ny fanamby amin'ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina ao Kabul.
Talohan'ny nahatongavan'izy ireo, ny minisitry ny raharaham-bahiny Ogande Jeneraly Jeje Odongo rehefa nanontaniana hoe iza no handoa ny fikolokoloana azy ireo tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fahitalavitra tamin'i Larry Madowoon, CNN, dia nilaza fa: "Fantatsika ny fijalian'ny mpitsoa-ponenana, ary amin'ny maha- firenena amin'ny vondrom-piarahamonina misy firenena, manana andraikitra amin'ny vondrona iraisam-pirenena isika, ary ny famantarana sy ny fifanakalozan-kevitra hatreto dia maneho fa handray andraikitra i Amerika. "
Ny trano fandraisam-bahiny any Entebbe dia miandry ny fidinan'ny rivotra avy amin'ny famandrihana satria nilatsaka ny mari-pana taorian'ny fihanaky ny valan'aretina COVID-19 tamin'ny taona 2020. Carol Natkunda, tompon'ny Askay Hotel Entebbe, dia naneho fanantenana fa handray ny vahiny nasaina manokana ireo hotely ireo eTurboNews napetrak'izy ireo hatrany amin'ny toerany hatrany ny fomba fiasa mahazatra momba ny asa efa hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Niova i Ogandà tamin'ny naha loharanom-baovao azy ka lasa mpandray mpitsoa-ponenana betsaka indrindra aty Afrika - mahatratra hatrany amin'ny 1.5 tapitrisa - ny ankamaroany dia avy any Sodana Atsimo, ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC), Burundi, ary Somalia.
Tamin'ny tolona fanoherana ny fitondrana apartheid tany Afrika Atsimo tamin'ny 1989, ny Governemanta Oganda dia nanome fototra ho an'ireo sesitany afrikanina tatsimo izay nanangana toby hampiantranoana ireo mpiady fahalalahana (Umkonto we Sizwe) ao amin'ny kongresy nasionaly afrikanina (ANC). Efatra ambin'ny folo amin'ireo mpiady no mijanona ao amin'ny sekolin'i Oliver Reginald Tambo ANC Leadership ankehitriny, Kaweweta.
Hatramin'ny Ady Lehibe Faharoa, rehefa nibodo ny ankamaroan'i Eropa ny Blitzkrieg Alemanina, dia poloney 7,000 - vehivavy sy ankizy mpitsoa-ponenana - no voatery nitsoaka tany Nyabyeya any amin'ny Distrikan'i Masindi sy Koja (Mpunge) ao amin'ny Distrikan'i Mukono ao amin'ny Protectorat Britanika taloha. Oganda. Tsy fahita matetika ny fijoroana ho vavolombelona amin'ireo havany mampihetsi-po sy ny taranany mandoa ny fanajana any amin'ny fasan'ny havany izay nalevina tao Oganda.